China workshop maindasitiri evaporative mweya inotonhorera china kugadzira XK-18/23 / 25S fekitori nevatengesi | XIKOO
XK-18/23 / 25S musangano maindasitiri evaporative mhepo inotonhorera ndiyo inonyanya kufarirwa maindasitiri emhepo inotonhorera. Takazvigadzira nemasimba akasiyana 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw kusangana zvakasiyana kudiwa. Uye kune kumusoro, pasi, padivi mhepo kuburitsa kuti ive nyore kuiswa pamadziro, padenga uye dzimwe nzvimbo. Inoshanda kutonhodza 60-80m2 chirimwa munzvimbo ine hunyoro uye 100-150m2 chirimwa munzvimbo yakaoma.
XK-18/23 / 25S modhi yemabhizimusi emhepo inotonhorera yakashongedzwa nemaindasitiri emhando yepamusoro, kusanganisira yakazara Nyowani PP zvinhu zvemuviri, anti-UV, anti-kukwegura, yakareba makore gumi nemashanu ehupenyu. 100% yemhangura-waya mota, mvura chiratidzo chiyero Ip54. Nylon & girazi faibha uye simbi fan, yakapfuura ine simba chiyero bvunzo usati washandisa. Corrosion kuramba uye yakanyanya kushanda pombi yemvura, maawa 13000 anoramba achishanda anoshanda hupenyu nguva. 10cm ukobvu inotonhorera pad, inopfuura 80% evaporative rate.Glue yakavharwa mvura chiratidzo wedunhu bhodhi ine Kupfuura mutoro kudzivirirwa, pamusoro pemari kudzivirirwa, kudzivirira kushomeka kwemvura uye yakazara-otomatiki drainage basa. LCD inodzora pani ine gumi nemaviri akachimbidzika. Mvura yetangi yemvura inogona kubviswa neUV-mwenje mudziyo (sarudzo)
Kununurwa Kwemhepo (pombi)
XK-18S / pasi
XK-18S / parutivi
XK-18S / kumusoro
XK-23S / pasi
XK-23S / parutivi
XK-23S / kumusoro
XK-25S / pasi
XK-25S / padivi
XK-25S / kumusoro
XK-18/23 / 25S musangano maindasitiri evaporative mweya inotonhorera ine kutonhora, humidification, kuchenesa, kuchengetedza simba kune rimwe basa, inonyanyoshandiswa zvakanyanya kumusangano, purazi, imba yekuchengetera, greenhouse, chiteshi, musika nedzimwe nzvimbo.
Pashure: Europe dhizaini yemhepo inotonhorera yekushandisa maindasitiri - nyowani yakakwidziridzwa duct kutonhora system maindasitiri mhepo inotonhorera XK-25H - XIKOO
Zvadaro: Nyowani 12cm ukobvu inotonhorera padiki maindasitiri emhepo inotonhorera XK-18/23 / ST
China mhepo inotonhorera
maindasitiri mweya unotonhorera
Kicheni Mhepo Inotonhorera
Oem Mhepo Inotonhorera
Wall Yakakwira Industrial Mhepo Inotonhorera